DESelect: Xalka Awoodgelinta Xogta Suuqgeynta ee Salesforce AppExchange | Martech Zone
Waxa ay muhiimad u leedahay suuqlayda in ay aas aasaan 1:1 safaro ay macaamiishu kula jiraan miisaan, degdeg ah, oo hufan. Mid ka mid ah aaladaha suuq-geynta inta badan loo isticmaalo ujeedadan waa Salesforce Marketing Cloud (SFMC).
SFMC waxa ay bixisaa fursado badan oo kala duwan waxayna isku daraysaa shaqadaas badan iyo fursadaha aan horay loo arag ee suuqgeynayaasha si ay ula xiriiraan macaamiisha marxaladaha kala duwan ee socdaalkooda macaamiisha. Suuqgeynta Cloud waxay, tusaale ahaan, awood u siinaysaa ganacsatada inay qeexaan moodooyinkooda xog, laakiin sidoo kale waxay awood u leeyihiin inay isku daraan ama soo geliyaan ilo xogeedyo badan, oo loo yaqaanno kordhinta xogta.
Debacsanaanta weyn ee ay bixiso SFMC waxaa ugu horreyntii loo aaneynayaa xaqiiqda ah in hawlgallo badan oo ka jira Cloud Marketing ay maamulaan weydiimaha SQL. Hawlaha suuqgeyntu sida qaybinta, shakhsiyaynta, iswada, ama xataa ka warbixinta waxay u baahan yihiin waydiin SQL gooni ah oo ku jirta Cloud Marketing marketing si ay u shaandheeyaan, u kobciyaan, ama isu geeyaan xog kordhinta. Suuqgeeyayaal yar ayaa leh aqoonta iyo xirfadda ay ku qoraan, tijaabiyaan, oo ay si madax-banaan u ciribtiraan su'aalaha SQL, taasoo ka dhigaysa habka qaybinta waqti-qaadasho (markaa qaali ah) oo inta badan u nugul khaladaadka. Xaaladda ugu macquulsan ee shirkad kasta waa in waaxda suuqgeyntu ay ku xiran tahay taageerada tignoolajiyada gudaha ama dibadda si ay u maareeyaan xogtooda SFMC.
DESelect waxay ku takhasustay bixinta xalinta xogta suuq-geynta ee Salesforce AppExchange. Xalkeedii ugu horreeyay ee jiid-iyo-soo-dejineed, Qaybta DESelect waxaa si gaar ah loogu abuuray suuq-geeyayaal aan lahayn waayo-aragnimo cod-bixineed, taasoo u oggolaanaysa inay isla markiiba geeyaan aaladda dhowr daqiiqo gudahood marka la rakibo si ay isla markiiba u bilaabaan kala-soocidda kooxaha la beegsanayo ololeyaal. Qaybta DESelect, suuqeeyayaashu maaha inay qoraan hal su'aal SQL ah.
Ha dooran Awoodaha
DESelect waxay leedahay xalal diyaarsan oo kala duwan si loo kordhiyo ROI ee Salesforce Suuqgeynta Cloud ee shirkadaha:
DESdoor Qaybta waxay bixisaa sifooyin kala qaybin dareen leh haddana awood leh iyada oo loo marayo xulashooyin. Doorashooyinku waxay u oggolaanayaan isticmaaleyaasha inay isku daraan ilaha xogta oo ay dabaqaan filtarrada si ay u abuuraan qaybo hab ka saaraya baahida weydiimaha SQL. Thanks to aaladda, isticmaalayaashu waxay qaban karaan hawlaha kala qaybinta ee SFMC 52% si dhakhso ah waxayna bilaabaan ololayaashooda ilaa %23 dhakhso ah, iyagoo sii wadaya inay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​fursadaha badan ee ay bixiso Suuqgeynta Cloud. DESelect waxay u saamaxdaa suuqlayda inay qaybiyaan, bartilmaameedsadaan, oo ay shakhsiyeeyaan isgaarsiintooda si madax banaan (iyaga oo aan u baahnayn khubaro dibadeed) iyo halabuur ka badan sidii hore.
KA DOORAN Xiriirinta waa xalka isku dhafka xogta suuq-geynta kaas oo u suurtageliya xirfadlayaasha suuq-geynta suuq-geynta si ay u badbaadiyaan waqtiga iyagoo si sahlan u dhexgalaya oo u ilaalinaya ilo kasta oo xog ah iyada oo loo marayo webhooks (API) Si Salesforce Suuqgeynta Cloud iyo/ama Salesforce CDP iyo gadaal, iyadoo la isticmaalayo wax aan ahayn jiid-iyo-jiid sifooyinka. Si ka duwan sida qalabyada waaweyn ee isdhexgalka, DESelect Connect waxaa loo dhisay suuqgeynayaasha shaqada, taas oo ka dhigaysa mid jilicsan, qiimo hoose marka loo eego xalalka kale, oo aad u fudud in la isticmaalo. Sida dhammaan alaabada DESelect, Connect uma baahna wax dhimis ah si loo rakibo ama loo habeeyo, si fudud ayaad u fur-oo-ciyaari kartaa. Tan ugu muhiimsan, uma baahna is-martigelin waxaana loogu talagalay iyadoo leh xadka SFMC ee tirada wicitaannada API.
DESDoctor Search maaha mid cusub, waa la helay oo wali waa sidii Chrome Extension si ay uga caawiso suuqlayda inay si fudud u raadiyaan wax kasta oo ku jira daruurtooda suuqgeynta. Baarista si buuxda isku dhafan ayaa kuu ogolaanaysa inaad raadiso Xog kordhinta, oo ay ku jiraan:
Isticmaalaha ayaa soo dira
Bishan, DESelect waxay sidoo kale sii daysay Raadinta AppExchange. Go'aanka ah in alaabta lagu daro suuqa Salesforce ayaa sabab u ah baahida caanka ah ee isticmaalayaasha ka shaqeeya ururada aan taageersanayn kordhinta chrome. Hadda, isticmaale kasta oo Suuqgeynta Cloud wuxuu helayaa faa'iidooyinka isticmaale-saaxiibtinimo iyo aalad waqti-badbaadinta ah.
DESdoor Astaamaha Qaybta
Ku biir xog kordhinta - Isticmaalayaashu waxay isticmaali karaan jiid-iyo-dhiibid si ay si fudud ugu biiraan kordhinta xogta oo ay qeexaan sida ay isku xiran yihiin. Maamulayaasha ayaa horay u qeexi kara xiriirkan.
Ka saar diiwaanada - Si la mid ah ku biirista xogta kordhinta, isticmaalayaashu waxay tusi karaan diiwaannada ay rabaan inay ka saaraan doorashadooda.
Ku lifaaq ilaha xogta – Way fududahay MA DOORAN in la isku xidho xidhiidhada ka imanaya ilo xogeed oo kala duwan.
Codso shuruudaha shaandhada - Isticmaalayaashu waxay codsan karaan shaandhooyin badan oo kala duwan oo ku saabsan kordhinta xogta iyo ilaha, taageeraya dhammaan qaababka goobta.
Samee xisaabinta - Su'aalo-hoosaadyadu waxay oggolaanayaan isku-darka xogta iyo fulinta xisaabinta, sida inta iibsi ee macmiilku sameeyey ama inta uu macmiilku kharash gareeyay.
Kala sooc oo xaddid natiijooyinka - Isticmaalayaashu waxay u kala saari karaan natiijadooda qaab alifbeeto ah, taariikh ahaan, ama qaab kasta oo kale oo macquul ah. Waxay kaloo xaddidi karaan tirada natiijooyinka haddii loo baahdo.
Qeex oo isticmaal liis-doorasho - Isticmaalayaashu waxay ku meelayn karaan qiyamka liiska xulashada iyo summadaynta maamule ahaan, taasoo u oggolaanaysa kooxdooda inay si hubaal ah u shaandheeyaan.
Deji qiyamka gacanta ama qaanuunka ku salaysan - Isticmaalayaashu waxay shakhsiyan karaan natiijooyinkooda, iyagoo dejinaya qiyamka buug-gacmeedka ama qaanuunka, tusaale ahaan, Female noqotaa Miss iyo Male noqotaa Mister.
Diiwaanada kala soocida oo leh xeerar - Diiwaanada waxaa laga soo saari karaa hal ama sharciyo badan, iyadoo la siinayo mudnaan gaar ah.
Isticmaal qaybta biyo-dhacyada - Isticmaalayaashu waxay ku dabaqi karaan qawaaniinta qashinka si ay u isticmaalaan 'qaybinta biyo-dhaca'.
Ha dooran Sheekooyinka Guusha
Waqtigan xaadirka ah, DESelect waxaa lagu kalsoon yahay noocyada caalamiga ah sida Volvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh, iyo A1 Telekom. Siyaasadda shirkadu ee ilaalinta xidhiidhka dhow ee macaamiisheeda halkaas oo tababar iyo taageero u heellan marxaladda bilowga ah, in kasta oo app-ku diyaar yahay laga bilaabo taariikhda rakibaadda, ayaa u oggolaatay sheekooyinka guusha joogtada ah.
Daraasadda Kiis Emerald: Saldhigga California sumurud waa hawl wadeen ka ah dhacdooyinka tooska ah iyo dhacdooyinka B2B iyo bandhigyada ganacsiga. Waxaa la asaasay 1985, summadan hormuudka ka ah suuqa ayaa ku xirtay in ka badan 1.9 milyan oo macaamiil ah 142 dhacdo iyo 16 hanti warbaahineed.
Emerald dhawaan bilaabay isticmaalka SFMC. Wax yar ka dib isticmaalka daruuraha, kooxdooda suuqgeyntu waxay ogaadeen inta ay le'eg tahay ku tiirsanaanta culus ee weydiimaha SQL iyada oo aan lahayn xal isticmaale-saaxiibtinimo ah oo loogu talagalay suuqgeynayaasha aan lahayn khibrad SQL. Waxay heleen wax-qabad la'aan xagga dhisidda xogta kordhinta ka hor waxayna la halgamayeen dabacsanaan la'aanta ah in la qeexo dhammaan qaybaha hore.
Kahor inta aan la isticmaalin DESelect, Suuqgeeyayaasha Emerald ma aysan helin xogta xogta, maadaama kooxdooda dhexe ay hore u dhiseen qaybo. DESelect waxa ay ka caawisay Emerald in ay awood u siiso kooxda suuq-geyneed si ay u helaan oo ay u maamulaan xogta dhammaan iyaga oo abuuraya qaybaha si hufan, oo madax-bannaan. Hadda, waxay xitaa eegayaan soo saarista DESelect ee ganacsatada laftooda si ay gebi ahaanba awood ugu yeeshaan isticmaalkooda SFMC.
DESelect waxay kordhisay waxtarka 50%. Aad bay u fududahay in hadda la sameeyo wax ad-hoc.
Gregory Nappi, Agaasimaha Sr., Maareynta Xogta & Falanqaynta Emerald
Si aad wax badan uga barato sida MA DOORAN waxay caawin kartaa ururkaaga:
Booqo DESelect Jadwalka DESelect Demo
Tags: a1 telekomAPIisweydaarsigaraadinta otomaatiga ahkordhinta chromeraadinta nuxurkakordhinta xogtakordhinta xogta isku xidhkaqaybta kordhinta xogtaha dooraniimaylka ayaa soo dira raadintaraadinta template emailiimaylka emailkasumurudshaandhaynta qeexitaannada raadintagoogle chrome kordhintaGregory NappiHelloFreshraadinta hawlaha weydiimaharaadinta weydiimahaiibiniibinta iibsigaiibka cdpdaruuraha suuqgeynta iibkasfmct-mobileVolvo Baabuurta Yurub